‘लुट २’ लाई सर्वाधिक हल र शो : के तोड्ला ‘छक्का पञ्जा’ को रेकर्ड ? « Mazzako Online
‘लुट २’ लाई सर्वाधिक हल र शो : के तोड्ला ‘छक्का पञ्जा’ को रेकर्ड ?
फिल्म ‘लुट २’ फागुन १३ गते, बिहिबारदेखि देशका एक सय बढी हलहरुबाट प्रदर्शनमा आएको छ । सर्वाधिक हल संख्या पाएको यो बहुप्रतिक्षित फिल्मले क्यएफएक्स अन्र्तगतका मल्टीप्लेक्स हलहरुमा मात्रै २२ शोज पाएको छ । निश्चल बस्नेत निर्देशित फिल्म ‘लुट २’ ले हल र शोज संख्या सार्वधिक पाएको हो । यसअघि कुनै पनि नेपाली फिल्मले यति धेरै हल र शोज संख्या पाएका थिएनन् ।
खुसीको कुरा त के छ भने, ‘लुट २’ को अग्रिम बुकिङका लागि खोलिएका टिकट शुक्रबार र शनिबार लागि सबै बुक्ड भैसकेका छन् । यो नेपाली फिल्म क्षेत्रको इतिहासमा पहिलो खुसीको खबर हो । झण्डै पाँच वर्ष अघि प्रदर्शनमा आएको ब्लकबस्टर फिल्म ‘लुट’ को सिक्वेल ‘लुट २’ हो । सिक्वेलमा निर्देशक, निर्माण र कलाकार दोहोरिएका छन् । माधव वाग्ले र नरेन्द्र महर्जनको संयुत्त निर्माण रहेको फिल्ममा सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, ऋचा शर्मा, सृजना सुब्बा, कर्म, सुशिल पाण्डे, प्रतिकराज न्यौपाने, विपिन कार्की लगायतको अभिनय रहेको छ । निर्देशक निश्चल बस्नेत र कलाकार प्रतिकराज न्यौपानेसँग गरिएको मज्जाको गफगाफ हेर्नुस् :
‘ठमेल बजार’ गीतले बजार पिटिरहेको बेला ‘लुट २’ ले सर्वाधिक व्यापार गर्ने फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ को व्यापारिक रेकर्डलाई समेत तोड्ने आँकलन गरिएको छ । यसै वर्ष प्रदर्शनमा आएको ‘छक्का पञ्जा’ १७ करोडको ग्रक कलेक्सन गर्न सफल भएको छ ।